ကြော်ငြာကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 3
အယ်လ်အေမြန်မာမိသားစုများ NLD ဂုဏ်ပြုပွဲနဲ့ ရန်ပုံငွေပွဲ ကျင်းပမည်
အယ်လ်အေမြန်မာမိသားစုများ NLD ဂုဏ်ပြုပွဲနဲ့ ရန်ပုံငွေပွဲ ကျင်းပမည် (မိုးမခ) ဧပြီ ၇၊ ၂၀၁၆ လက်ခံရရှိသော အများသို့ ဖိတ်ကြားစာမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် “NLD လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်...
နိုင်မြန်မာ၏ သူပုန်စာအုပ် မိတ်ဆက်မည် (ကာတွန်းဝင်းအောင် ဖေ့စ်ဘွတ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆ သတင်းမီဒီယာများနဲ့ အနုပညာမိတ်ဆွေများ ကြွရောက်ကြဖို့ ဖိတ်ကြားပါတယ် တက်ရောက်ချီးမြှင့်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအား သီချင်း CD လက်ဆောင်ပေးမည်...
(ပထမအကြိမ် ကာတွန်းစကားဝိုင်းတုန်းက ပုံ) ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကာတွန်းစကားဝိုင်း (ပန်းဆိုးတန်းဂယ်လရီ) (မောင်မောင်ဖောင်တိန်ဖေ့စ်ဘွတ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၆ ကာတွန်းပညာရှင်တွေ ဆွေးနွေးပြောဆိုတဲ့ ကာတွန်းစကားဝိုင်းကို ပထမအကြိမ်အဖြစ် ဆရာကြီးဦးခင်မောင်လတ်နဲ့ ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်မျိုးချစ်တို့ ပြခန်း(လှည်းတန်းစင်တာ)မှာ ကျင်းပပြီးပါပြီ။ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် စကားဝိုင်းကိုတော့ ပန်းဆိုးတန်းဂယ်လာရီမှာ...
နိုဘယ်-မြန်မာ စာပေပွဲတော်တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်း (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၆ ဇန်န၀ါရီ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈ မှာ ကျင်းပမယ်။ အားလုံးကို ဖိတ်လိုက်ပါတယ်။ No...
မြန်မာကာတွန်း နှစ် ၁၀၀ ပွဲတော် ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၃၁ ရန်ကုန်၊ ကျင်းပမည် ကာတွန်းပွဲတော် ပြန်ကြားရေး ကော်မတီ၊ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၅ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကို ၂၀၁၅၊...
မြန်မာ ဒီဂျစ်တယ် ကွန်တင့် အိစ္စပို ၂၀၁၅ ခရစ္စမတ် ရက်သတ္တပတ် ကျင်းပမည်
မြန်မာ ဒီဂျစ်တယ် ကွန်တင့် အိစ္စပို ၂၀၁၅ ခရစ္စမတ် ရက်သတ္တပတ် ကျင်းပမည် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related...
☮ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ (အမေရိကန်နိုင်ငံ) ☮
☮ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ (အမေရိကန်နိုင်ငံ) ☮ (မိုးမခရွာဆော်ကြီး) ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၅ ၁) ဒေါက်တာသိန်းလွင် ၂) ကိုစိုးထွန်း ၃) မသူသူမာ ၄) ကိုဘုန်းပြည့်ကြွယ်...
မိုးမခမဂ္ဂဇင်းကို လစဉ် ရန်ကုန်မြို့တွင်း အိမ်အရောက်ပို့ပေးမည် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅ မိုးမခ လစဉ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်း ကို ရန်ကုန်မြို့တွင်း စာဖတ်သူများထံသို့ အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ...
မိုးမခ မဂ္ဂဇင်း ဒီဇင်ဘာ ထွက်ပြီ ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅ မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း အတွဲ-၂၊ အမှတ်-၁၂၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ထွက်ပါပြီ။ နီးစပ်ရာ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်များမှာ မေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ နှင်းဆီဖြူစာပေတိုက်မှလည်း ဖြန့်ချိပါသည်။ တအုပ် ၁၅၀၀...
“ပင်လယ်ညကဗျာ” စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
“ပင်လယ်ညကဗျာ” စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ (မိုးမခကြော်ငြာ) နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅ ကဗျာဆရာကြီးမောင်နီမွန်၏“ပင်လယ်ညကဗျာ“စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် ဖြန့်ချီ/ရောင်းချပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် မိတ်ဆက်ပွဲသို့အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းကြွရောက်ပေးပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် ။ နေ့ရက် – ၁၃၇၇ ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ ၂၆.၁၁.၂၀၁၅(ကြာသာပတေးနေ့) အချိန် – ညနေ(၃:၀၀)နာရီမှ(၄:၃၀)နာရီအထိ...
အောင်ဒင်၏ နွေတညနှင့်တူသောညများ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅ ခေတ်ပြတိုက်စာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေသော ဆရာအောင်ဒင်၏ “နွေတညနှင့်တူသောညများ” စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲသို့ ပူးတွဲပါ အစီအစဉ်အတိုင်း တက်ရောက်ချီးမြှင့်ပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ “နွေတညနှင့်တူသောညများ” စာအုပ်သည် ဆရာအောင်ဒင်...
မောင်စွမ်းရည်နှင့်မိတ်ဆွေများ စာပေ စကားဝိုင်း နိုဝင်ဘာ ၁၇ ကျင်းပမည် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅ မိုးမခ မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို ဖိတ်ပါတယ်။ မောင်စွမ်းရည်နှင့် မိတ်ဆွေများ ပြန်လည် တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်ရင်း...
Nilanjana Sengupta ၏ စာအုပ် – မြန်မာအမျိုးသမီးတို့၏ အသံ – ခင်မျိူးချစ် မှသည် အောင်ဆန်းစုကြည် စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ စင်္ကာပူတက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပမည်
Nilanjana Sengupta ၏ စာအုပ် – မြန်မာအမျိုးသမီးတို့၏ အသံ – ခင်မျိူးချစ် မှသည် အောင်ဆန်းစုကြည် စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ စင်္ကာပူတက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပမည် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅ ဖိတ်စာကတော့...
မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)၊ ညီမင်းညို၊ ဦးဘုန်း(ဓာတု) စာပေဟောပြောပွဲ ဘေးဧရိယာ မနက်ဖြန် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၉၊ ၂၀၁၅ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ညနေ ၅ နာရီခွဲက ည ၁၀နာရီ ခွဲအထိ (ကပ္ပိယထိပ်ပြောင်...
ချမ်းမြ – “ပန်းချီ နှင့် ဓာတ်ပုံပြပွဲကျင်းပမည်”
ချမ်းမြ – “ပန်းချီ နှင့် ဓာတ်ပုံပြပွဲကျင်းပမည်” (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့အချုပ်မှ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးရံပုံငွေ ပွဲအဖြစ် ပန်းချီ နှင့် ဓာတ်ပုံပြပွဲကိုကျင်းပကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုရံပုံငွေပွဲကို ၂၀၁၅...
NLD ရန်ပုံငွေ ပန်းချီ ပြပွဲ – စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၇
NLD ရန်ပုံငွေ ပန်းချီ ပြပွဲ – စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၇ (မိုးမခရွာဆော်ကြီး) စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts...
အောက်တုိုဘာ ၁၀၊ စာပေဟောပြောပွဲ အောက်တိုဘာ ၁၇၊ တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများအတွက် (မုိုးမခကြော်ငြာ) စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅ Tags: ဆန်ဖရန် Related posts နွယ်ခွေ – မေတ္တာနန္ဒစာသင်ကျောင်းက အပြန် (MoeMaKa...
☮ နယူးယောက်မြို့စာပေဟောပြောပွဲဖိတ်ကြားလွှာ ☮ စက်တင်လာ ၁၂ စနေနေ့ (မိုးမခ ကြော်ငြာ) စက်တင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅ နယူးယောက်မြို့နေ ရဟန်းရှင်လူ၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၊ စာပေမြတ်နိုးသူ၊ ၀ါသနာရှင် များအားလုံးသို့ စာပေဟောပြောပွဲသို့ကြွရောက်လာကြပါရန် နယူးယောက်မြို့စာပေဟောပြောပွဲဖြစ် မြောက် ရေးကော်မတီမှတလေးတစားဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮●☮...
မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)၊ ဦးဘုန်း(ဓာတု)၊ ညီမင်းညို ☮ စာပေဟောပြောပွဲ ☮ ၀ါရှင်တန်မက်ထရို ဧရိယာ ကြေညာ (မိုးမခ) ကိုမျိူး ဂရပ်ဖစ်၊ စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၅ ☮ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊...
☮ အမေ ရိ က န် ပြ ည်ထောင် စု တ ခွ င်...